လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်နိုင်ငံသားများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနအပြောင်းအလဲ:application များအတွက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခိုလှုံခွင့်၏ပံ့ပိုးပေးဖို့ချဉ်းကပ်မှုအသစ် 2018 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ | USAHello | USAHello
<span lang ="ar">လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်နိုင်ငံသားများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနအပြောင်းအလဲ:application များအတွက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခိုလှုံခွင့်၏ပံ့ပိုးပေးဖို့ချဉ်းကပ်မှုအသစ် 2018 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ</span>
ခိုလှုံခွင့် Aljawoualssayas မှတစ်နှစ်သစ်တစ်ခုချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ် 2018 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ.
ခိုလှုံခွင့် Aljawoualssayas မှတစ်နှစ်တစ်ဦးကချဉ်းကပ်မှုအသစ် 2018 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ.
2018 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတောင်းဆိုမှုများအတွက်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နားထောင်ရန်စောင့်ဆိုင်းအကြောင်းကို 300,000 လူတွေရှိပါတယ်. ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်မည် သူတို့အပလီကေးရှင်းများအားလုံးဖြေရှင်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွလျှောက်ထားအင်တာဗျူးတစ်ဦးကအချိန်ကြာမြင့်စွာ.
ထိုပြဿနာကို, အမေရိကန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနဖြေရှင်းရန် Bngaramlatha အတွင်းခိုလှုံခွင့်တောင်းခံတွေ့ဆုံမေးမြန်းများအတွက် 2018. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အသစ်ကလျှောက်ထားတွေ့ဆုံမေးမြန်းပထမနှင့်ပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်စာရင်းအားဖြင့်ပြုပြင်ကျင်းပ. ဒါကစနစ်သစ်ဖြစ်ပါသည်:
ပထမဦးစွာဦးစားပေး: အင်တာဗျူးအဘို့စီစဉ်ထားပေမယ့်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားန်ဆောင်မှုများအမေရိကန်၏ပံ့ပိုးပေးဖို့လျှောက်ထားသူသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များ၏မေတ္တာရပ်ခံချက် re-အင်တာဗျူးအချိန်ဇယားဖြစ်ခဲ့ပြီ Applications ကို.
ဒုတိယအချက်မှာဦးစားပေး: ဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြကြောင်း Applications ကို 21 နေ့ရက်များဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း.
သငျသညျနိုငျငံရေးအခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုတင်သွင်းလျှင်သင်ပြီးအလုပ်ပါမစ်များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် 150 တစ်နေ့တွင်. ထိုအခါသင်သည်လက်ခံသည်အထိသင်သည်အလုပ်လုပ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်သင်ငြင်းဆန်. အဆိုပါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားကဆိုပါတယ်နှင့်ဖြစ်စဉ်သစ်တစ်ခုသာအလုပ်ပါမစ်ရဖို့ကနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟု. သငျသညျအစားအနှစ်ကိုစောင့်ဆိုင်း၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အသစ်များကိုလျှောက်ထားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေတယ်ဆိုရင်, လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်သူတို့ပစ္စုပ္ပန်မပေမယ့်သူတို့တစ်တွေကအခြေအနေကောင်းတယ်ရှိသည်ဖွယ်ရှိသည်ယုံကြည်နေ. ပံ့ပိုးပေးခိုလှုံခွင့် applications များငြင်းဆန်ခဲ့သည်သည့်အခါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကြောင့်ဤအမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားကဆိုသည်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူလိမ့်မယ်, တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအမှု၏အခြေခံပေါ်တွင်အရေးပေါ်တောင်းဆိုချက်အရအထက်ပါ၏ဦးစားပေးအမိန့်ပြင်ပတွင်အင်တာဗျူးများအတွက်အချိန်ဇယားကိုဆုံးဖြတ်သည်. နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုမှုများ၏ရုံးရေးသားခြင်းအတွက်အင်တာဗျူးမဆိုချက်ချင်းအချိန်ဇယားဆွဲပေး ကျေးဇူးပြု. သင့်ရဲ့. စာမကျြနှာသို့သွားပါ တိကျတဲ့ရုံးများနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်နိုင်ငံသားများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များအတွက်.
သူတို့ကနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် join ဖို့သူတို့သားသမီးသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်အောင်တချို့ကပံ့ပိုးပေးခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အတှကျအထိလေးနှစ်စောင့်ဆိုင်း. ဒါဟာသူတို့ကိုရှည်လျားတဲ့ကာလအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိခြင်းများအတွက်အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်. နှင့်လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနနှင့်ထိုလျှောက်ထားများအတွက်တရားမျှတသောလုပ်ငန်းစဉ်၏အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု. သငျသညျပြီးသားရှေ့နေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေလျှင်, ငါတို့သည်သင့်ကိုကူညီမယ့်ရှေ့နေရှာတွေ့အကြံပြု.